Mpamatsy ambongadiny ankizy mpamatsy satroka Disney Mickey mpamatsy sy mpanamboatra | Xingliao
Satroka Disney Mickey fanao amin'ny ankizy
Disney Mickey kofehy polyester amboradara dimy tontonana avo lenta fanao amin'ny lohataona lohataona zazakely satroka.
Fomban'ny tontonana: Satroka 5-Panel
Habe: 52-56cm, plastika 7 buckle buckle
Materia: Polyester 100%
GW sy NW: 8/6 kg
Vita amin'ny akrilika 100% ary loko miloko volondavenona, 57,3 g ny lanjany, mety amin'ny taona 0 ka hatramin'ny 2, azontsika atao koa ny manamboatra azy araka ny habeny sy ny lokony. Ny peta-kofehy dia toa fehin-kibo plastika fito sy fotsy miloko tena tsara sy fotsy miaraka amin'ny firakofana anatiny fotsy. Misy zaitra efatra ny molony.
Noho ny fanohanana tena tsara, karazana varotra avo lenta, vidiny mahery setra ary fandefasana mahomby, tianay ny anarana tsara eo amin'ireo mpanjifanay. Izahay dia orinasa mazoto manana tsena midadasika ho an'ny fivarotana fivarotana orinasa China Cotton Cotton bucket Hat dia hanao pirinty tanteraka, ny fahafinaretan'ny mpanjifa no tena tanjonay. Miarahaba anao izahay hametraka ny fifandraisany aminay. Raha mila fanazavana fanampiny aza, mifandraisa aminay.
Quality First, ary ny Client Supreme no torolàlana anay hanomezana ny fanampiana tena tsara indrindra ho an'ireo mpiantsena anay. Nandritra izay andro izay, niezaka mafy izahay mba ho anisan'ireo mpanondrana tsara indrindra ao anatin'ny sahaninay mba hanomezana fahafaham-po ny mpanjifa mila ilain'ny Professional Design China 3D Model Shaping. Baseball Cap Mickey Cap Gift Cap Fama mpanamboatra audit, Manantena mafy izahay hanome anao sy ny fikambanananao fiandohana ambony. Raha misy zavatra hataonay mifanaraka amin'ny zavatra ilainao dia ho faly kokoa izahay hanao izany. Tongasoa eto amin'ny toeram-pamokarana hijerena.
Teo aloha: Saron-baseball Retro 100% landihazo
Manaraka: Kitapo vehivavy
Cap vita pirinty vita amin'ny landihazo
Disney 5 board twill polyester feno kintana embroi ...
Satroka biby goavam-be fanaon'ny ankizy
Ankizy satroka disney spiderman manokana
Satroka camouflage ho an'ny ankizy
Saron-baseball Retro 100% landihazo
Satrony amin'ny landy vita amin'ny landihazo miaraka amina motika eo anoloana, ...